“လွတ်လပ်လွန်းပြီး မျှတမှု မရှိ”ဟု ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ပြော
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း > “လွတ်လပ်လွန်းပြီး မျှတမှု မရှိ”ဟု ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ပြော
“လွတ်လပ်လွန်းပြီး မျှတမှု မရှိ”ဟု ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ပြော	ဝေစန္ဒာ	| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မေလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၁၇ မိနစ်	ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်လွန်း သည့် ရွေးကောက်ပွဲ၊ မျှတမှု မရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲတခုဟု ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက ပြောဆို သုံးသပ် သွားခဲ့ကြောင်း အင်္ဂါနေ့ အစည်းအဝေးအား တက်ရောက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောဆိုကြသည်။နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၇ ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်တဦးအား ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ တွေ့ဆုံ၍ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အတွေ့အကြုံများ၊ သုံးသပ်ချက်များ၊ အခြေအတင် ဖြစ်ခဲ့မှုများကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီမှ ဦးစိုးဝင်းက ပြောသည်။“၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲထက် ပိုကောင်းတဲ့ ဒီ့ထက်ပိုပြီး လွတ်လပ်ပြီး ပွင့်လင်းမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ဦးတင်အေး က ပြောတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတော့ သူတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေတွေထဲက မျှတမှု ရှိမရှိ တင်ပြကြတာပေါ့” ဟု ဦးစိုးဝင်း က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ တိုင်ကြားထားသော ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်များပေါ်တွင် ဖယောင်းသုတ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။“ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်ပေါ်မှာ ဖယောင်းသုတ်တာ မဟုတ်ဘဲ အသုံးပြုတဲ့ စာရေးကိရိယာ ပစ္စည်းတွေရဲ့ ချို့ယွင်းချက်ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ပါတီတခုက ပြောတယ်။ တချို့ပါတီတွေလည်း ထောက်ခံတယ်” ဟု အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့သည့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ ထိုသို့ “ဖယောင်းသုတ်မှု ဖြစ်စဉ်မျိုး လုံးဝ မရှိခဲ့ကြောင်း” ကော်မရှင်က မေလ ၉ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ပြီး ဖြစ်သည်။ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကော်မရှင်အနေနှင့် မဲစာရင်းထုတ်ပြန်မှု အားနည်းချက်များ ရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ၂ဝ၁၅ရွေးကောက်ပွဲတွင် ထိုအားနည်းချက်များ မဖြစ်ရန် လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ကော်မရှင်မှ ပြောဆိုသွားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဟဲဟိုး လေယာဉ်ပျက်ကျမှု စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေး	တရားသေလွှတ်ပေးရန် NLD ဦးဉာဏ်ဝင်း လျှောက်လဲချက် တရားရုံး ပယ်ချ	ကချင်ကျောင်းသူ သေဆုံးမှု စုံစမ်းပေးရန် လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ထံ တိုင်ကြား	ဒု-ဝန်ကြီးများ၏ လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရန် မရှိသေး	ဦးအောင်သိန်းလင်း အမတ်ဖြစ်မှ ရုတ်သိမ်းပေးရန် ကော်မရှင်ကို တင်တော့မည်	ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ပဋိပက္ခ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် သမ္မတဖွဲ့စည်း	ဦးအောင်သိန်းလင်းကို အမတ်အဖြစ်မှ ရုတ်သိမ်းရေး နှိုးဆော်မှုများ ရှိနေ	Who is Online
We have 193 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved